AbaQhagamsheli abavelisi - iChina izihlanganisi zeFektri kunye nababoneleli
Ukuthengiswa kwemveliso kugqityiwe
Izinto umatshini Coffee
Ikhava yasemva yomlandeli
34 kunye ne-4 pin connector
Isixhobo sokulinganisa ubushushu
Kunye PCBA ipleyiti entabeni inxalenye
✭ Isinxibelelanisi sommeli okanye sisongele i-API evumela inkonzo engaphantsi ukuba ithethe neMicrosoft Power automate, iMicrosoft Power Apps, kunye neAzure Logic Apps. Inika indlela yabasebenzisi yokuqhagamshela iiakhawunti zabo kunye nokusebenzisa iseti yezenzo ezakhiweyo kunye nezinto ezibangela ukuba bakhe iiapps zabo kunye nokuhamba komsebenzi.
✭ Ukuchaneka kwenxalenye yeplastiki kuphezulu kakhulu, kwaye indawo yokuthelekisa kufuneka yenziwe ngaphakathi kokunyamezelana kwe-0.01-0.02mm. Imathiriyeli yayo i-LCP izinto ezingacimi mlilo V0.
✭ Le mveliso kufuneka iveliswe ngesantya esiphezulu, inaliti yokubumba umatshini, kunye nomjikelo wenaliti omfutshane kunye nokuchaneka okuphezulu kwemveliso. Umjikelo wenaliti kufuneka ulawulwe ngaphakathi kwemizuzwana eyi-15-25 ukuqinisekisa ukuba ubukhulu bemveliso buhambelana.
✭ Iimfuno zokubumba nazo ziphezulu kakhulu, kwaye isikhundla sokudibanisa imveliso kufuneka senziwe ngokufakwa okungafaniyo, kwaye ukunyamezelwa kokufakwa ngakunye kufuneka kuqinisekiswe kuluhlu lokunyamezelana lwe-0.005mm.
✭ Ukuba uneemveliso ezifanayo, Nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi. Siya kuba liqabane lakho.
Isiciko esincinci sokuhambisa i-servo
✭Ngokwanda okuqhubekayo kwemarike yeerobhothi, iinkampani ezininzi zokwenza iirobhothi zisungule ukhuphiswano olunamandla. Ubomi benkonzo yeerobhothi, ukunciphisa ingxolo kuye kwaba yingxaki enkulu kubuchwephesha. Eli candelo le-servo servo encinci lidlala indima ebaluleke kakhulu, kuba indibaniselwano nganye yeerobhothi ifuna i-servo ukufezekisa iintshukumo ezahlukeneyo.
✭Inxalenye yethu yeplastiki yinxalenye yezindlu zegiya lokuqhuba le-servo, kwaye izinto zeplastiki ezisetyenzisiweyo zizinto zokusebenza eziphezulu ze-PA66 + 30GF. Phantsi kwentshukumo yegiya yokuhambisa izixhobo ze-servo, inokuqinisekisa ukuba iqokobhe leplastikhi alizukukhubazeka kwaye lihlale lizinzile ngexesha lokuhamba kwegiya. Eli qokobhe leplastikhi lineemfuno eziphakamileyo kakhulu zokuchaneka komngundo, ngakumbi ukunyamezelana okujolise kumngxunya wokubekwa kwegiya, ukuqinisekisa ukuba ukuphakathi kokunyamezelana kwe-0.005mm. Izinto zethu sokubumbela zenziwa kusetyenziswa izinto kwamanye amazwe evela Becu kunye S136.
✭Eli qokobhe leplastikhi lenziwe ngamaqokobhe amathathu eplastiki, iqokobhe eliphezulu, iqokobhe eliphakathi kunye neqokobhe elisezantsi. Kufuneka zifaniswe ngokugqibeleleyo ukuqinisekisa ukuba indawo ekubekwe kuyo umngxunya wokubekwa kwegiya iyahambelana. Ke ngoko, kolu hlobo lwamalungu eplastiki achanekileyo, isikhunta se-2 kuphela, ukuze ubungakanani bulawulwe ngcono.
✭Ukuba uneemveliso ezifanayo, Nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi. Siya kuba liqabane lakho.